တတိယလူ ၀င်လာတဲ့အခါ – Shinyoon
တတိယလူ . . . .အရမ်းကို သင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မောင်နှမတွေ အရမ်းကို ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သမီးရည်းစားလင်မယားတွေ စည်းလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ မိသားစုတွေကြား တတိယလူ ၀င်လာတဲ့အခါ အလိုလို ပြိုပျက် ပျက်စီးရပါတယ်
တတိယလူတဲ့ စကားလုံးလေး ရိုးရှင်းသလို အဓိပ္ပါယ်လဲ ထင်သလောက် မနက်နဲပါဘူး ချစ်သူနှစ်ဦးကြား၀င်လာတတတ်တဲ့ တတိယလူတွေကတော့ အများကြီးပဲပေါ့ သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေ ပြီးတော့ ကြောင်တောင်နိုက်ချင်တဲ့ တစ်လုံးချိုင့်တွေ အများကြီးပါ တတိယ လူ၀င်လာတဲ့အခါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပွင့်လင်းဖို့နဲ့ ယုံကြည်ဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်
မပွင့်မလင်းနဲ့ မရိုးမသား လုပ်နေရင် အဲ့ဒီ ဆက်ဆံရေးတွေက ပျက်ဆီးမှာပဲ မယုံကြည်မှုတွေကနေ တဖြေးဖြေး သံသယတွေ ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံး လမ်းခွဲခြင်းတွေ အမုန်းတွေနဲ့သာ အဆုံးသတ်ပါတယ်နား နှစ်ဖက် မျက်လုံးနှစ်ဖက်ရှိတာ မျှမျှတတ ကြည့်ပြီး နှစ်ဖက်လုံးကို နားထောင်ပါ တစ်ဖက်တည်းကို စုံလုံးကန်းပြီး မယုံနဲ့
မိဘတွေ ပြောလို့ မောင်နှမတွေကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ချစ်လျက်နဲ့ ဝေးရခဲ့ဖူးသူတွေ အများကြီးပါ သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ သာဓကတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အရမ်းတွေ ချစ်ပါလျက်နဲ့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် သံသယတွေ ထားလာတဲ့အခါ ရှေ့ဆက်လက်တွဲဖို့လဲခက် လက်ခွဲပြတ်စဲဖို့လဲခက်နဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့သာ အဆုံးသတ်ရတယ် ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လင်နဲ့မယားကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တတိယလူဆိုတာ ရှိကို မရှိသင့်ဘူး ကိုယ့်ချစ်သူထက် ပိုပြီးလဲ မယုံကြည်သင့်ဘူး သံသယတွေ ရှိလာတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီးမထားနဲ့ ချက်ချင်း မေးပြီး ချက်ချင်းဖြေရှင်းတာပဲ ကောင်းတယ် တခြားတစ်ယောက်ကို လိုက်ပြီးပြောပြနေတာထက် ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးတာက သူ့အပေါ် ယုံကြည်ရာရောက်ပါတယ်
တတိယလူဆိုတာ . . . ဘာမှ ဖြစ်မလာမှန်းသိရင် အချိန်တန် သူ့လမ်းသူဆက်ပြီးလျှောက်သွားမှာပဲ အဲ့ဒီခဏလေးမှာ ဒီထက်ပိုပြီး ခိုင်မြဲတဲ့ သံယောဇဥ်တွေ မေတ္တာတွေ တည်ဆောက်ပါ ချစ်လျက်နဲ့ ဝေးရတဲ့အဖြစ်မျိုး ဆက်ပြီး မဖြစ်စေချင်ဘူးညီအစ်ကို မောင်နှမဆိုတာ လောကကြီးကပေးတဲ့ ဆုလာဒ်တွေထဲက အလှဆုံးသော အရာပါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်၀မ်းမကွဲစေနဲ့
သူစိမ်းတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာ ဘေးပတ်၀န်းကျင်ကြားလို့လဲ မကောင်းဘူး ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီးရင်းနှီး သူစိမ်းကတော့ သူစိမ်းပါပဲ ဒုက္ခတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အတူတူရှိမှာဆိုလို့ သွေးသားရင်းတဲ့ ဒီညီအစ်ကို မောင်နှမတွေပဲရှိတာ
ခုချိန် သူစိမ်းကို အားကိုးလို့ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို မကောင်းမြင်နေရင် နောင်တစ်ချ်ိန်မှ နောင်တတွေ အကြီးကြီးရလိမ့်မယ် နွားကွဲရင် ကျားဆွဲတယ်ဆိုတဲ့စကား ကြားဖူးတယ်မလား ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာ ကိုယ့်မောင်နှမသားချင်းတွေကို ကိုယ်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမှာလေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မယုံမကြည်ဖြစ်နေရင် စဥ်းစားတာကြည့်တော့
ဘယ်ဆက်ဆံရေးမှာမဆို တတိယလူ ၀င်လာတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်ထိခိုက်ရတာပါပဲ ဒါပေမယ့် နှစ်ရှည်လများ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုဘ၀တွေ ဆက်ဆံရေးတွေ လက်တွဲတွေ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ဖို့ထိတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး တကယ်လို့ လူနှစ်ဦးသာ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ယုံကြည်ထားရင် ဘယ်သွေးထိုးစကားကြောင့်မှ ဝေးသွားဖို့မလိုပါဘူး။